Nhau Archieven - Law & More B.V.
Nhau dzakakosha dzemutemo, mitemo yazvino nezviitiko | Law and More
Kudzivirirwa kwevatengi uye mazwi akajairwa uye mamiriro
Vemabhizimusi vanotengesa zvigadzirwa kana kupa masevhisi kazhinji vanoshandisa zvakajairika mamiriro uye mamiriro kudzora hukama neanogamuchira chigadzirwa kana sevhisi. Kana iye anogamuchira ari mutengi, anofarira kuchengetedzwa kwevatengi. Kudzivirirwa kwevatengi kunogadzirirwa kuchengetedza mutengi 'asina kusimba' kubva kune 'akasimba' muzvinabhizimusi. Kuti uzo […]
Vanhu vazhinji vanosaina chibvumirano vasinganzwisise zvirimo
Saina kondirakiti usinganyatsonzwisise zvirimo Tsvagiridzo inoratidza kuti vanhu vazhinji vanosaina chibvumirano vasina kunyatsonzwisisa zvirimo. Muzviitiko zvakawanda izvi zvine chekuita nekuhaya kana kutenga zvibvumirano, zvibvumirano zvebasa uye zvibvumirano zvekumisa. Chikonzero chekusanzwisisa zvibvumirano chinogona kuwanikwa mukushandisa mutauro; […]
Mutemo weDutch Soutness Unobatsira mushure mekuremara kwebasa nekuda kwekunyunyuta kwepfungwa mushure memimba?
Kurwara Mabhenefiti Mutemo Kubva pachinyorwa 29a cheSickness Benefits Act mukadzi wechikadzi akachengetedzwa uyo asingakwanise kuita basa ane kodzero yekupihwa muripo kana chikonzero chekuremara kushanda chine chekuita nepamuviri kana kubereka. Kare, kubatana pakati kwepfungwa […]
MuNetherlands mumwe munhu akagamuchira pasipoti isina kusarudzika zita rechikadzi
Kwenguva yekutanga muNetherlands mumwe munhu akagamuchira pasipoti pasina zita rechikadzi. Mai Zeegers havanzwe kunge murume uye havanzwe kunge mukadzi. Pakutanga gore rino, dare reLimburg rakasarudza kuti murume kana mukadzi haisi nyaya yehunhu asi ye […]
Hurumende inoda kuganhurira pension pachayo kana zvasvika pakurambana
Hurumende yeDutch inoda kuronga kuti vadyidzani avo vari kuwana kurambana vanowana kodzero yekugamuchira hafu yepenjeni yemumwe nemumwe. Gurukota reDutch Wouter Koolmees weSocial Affairs uye Employment anoda kukurukura nezvechisungo muChipiri Chamber pakati pa2019. Munguva iri kuuya iyo […]
Mufambi akachengetedzwa zviri nani kubva mukubhuroka kubva kune wekufambisa anopa
Kune vanhu vazhinji ichaita husiku husiku: zororo rawakashanda zvakaoma kwegore rese rakamiswa nekuda kwekubhuroka kweanopa mafambiro. Neraki, mukana weizvi zvichiitika kwauri wakadzikiswa nekuitwa kwemitemo mitsva. Musi waChikunguru 1, 2018, nyowani […]
Musiyano uripo pakati peanodzora neprosesa
Iyo General Data Dziviriro Regulation (GDPR) yatove nemwedzi yakati wandei ichishanda. Zvisinei, kuchine kusava nechokwadi pamusoro pezvinoreva mamwe mazwi mu GDPR. Semuenzaniso, hazvisi pachena kune wese munhu kuti musiyano uripapi pakati peanodzora uye processor, nepo izvi zviri musimboti […]
Miitiro isina kutendeseka yekutengesa kuburikidza nekuwedzera kwefoni
Dutch Chiremera cheVatengi neMisika Mako maitiro asina kunaka ekutengesa kuburikidza nekutengesa nhare zvinotaurwa kakawanda. Uku ndiko kupera kweDutch Authority yeVatengi neMisika, manejimendi akazvimiririra anomiririra vatengi nemabhizinesi. Vanhu vanotaurwazve nekuwanda nerunhare nezvinonzi zvinopihwa zve […]
Kugadziriswa kweDutch Trust Office Supervision Act
Dutch Trust Hofisi Yekutarisisa Mutemo Zvinoenderana neDutch Trust Hofisi yekutarisisa Mutemo, sevhisi inotevera inoonekwa sevhisi yekuvimba: kupihwa kwekugara kwesangano repamutemo kana kambani mukubatana pamwe nekupihwa mamwe mabasa. Aya masevhisi ekuwedzera anogona, pakati pezvimwe zvinhu, anosanganisira kupa […]
Copyright: runyararo rurini?
Intellectual property mutemo unogara uchikura uye wakakura zvakanyanya munguva pfupi yapfuura. Izvi zvinogona kuonekwa, pakati pevamwe, mumutemo wekodzero. Mazuva ano, anenge munhu wese ari paFacebook, Twitter kana Instagram kana ane yake webhusaiti. Saka vanhu vanogadzira zvirimo zvakawanda kupfuura zvavaimboita, izvo zvinowanzoburitswa pachena. […]
Mununuri kwete mushandi
'Deliveroo bhasikoro rekutakura Sytse Ferwanda (20) muzvinabhizimusi akazvimiririra uye asiri mushandi' ndiwo mutongo wedare kuAmsterdam. Chibvumirano chakapedzwa pakati pemununuri naDeliveroo hachiverengi sechibvumirano chebasa - uye nekudaro mununuri haasi mushandi ku […]
Poland yakamiswa senhengo yeEuropean Network yeMakanzuru eJudicial (ENCJ)
European Network yeMakanzuru eVatongi IEuropean Network yeMakanzuru eVatongi (ENCJ) yamisa Poland senhengo. Iyo ENCJ inotaura kusava nechokwadi pamusoro pekusununguka kwesimba rehutongi rePoland zvichibva pane shanduko dzichangobva kuitika. Bato rinotonga rePoland Mutemo neJustice (PiS) ine […]
Kutumira isina kunaka neyenhema ongororo yeGoogle inodhura
Kutumira zvakaipa uye kunyepa kweGoogle kuongororwa kunodhura mutengi asina kugutsikana zvakanyanya. Mutengi akatumira wongororo dzisina kunaka maererano nerekireshi uye neBhodi reVatungamiriri pasi pemamwe maratidziro uye asingazivikanwe. Dare redzimhosva reAmsterdam rakati mutengi haana kupokana nekuti haana kuita zvinoenderana ne […]
Uri kuronga nezvekutengesa kambani yako?
Amsterdam Dare rekukwidza Ipapo zvine hungwaru kukumbira kurairwa kwakakodzera nezve mabasa maererano nekanzuru yemabasa yekambani yako. Nokuita kudaro, iwe unogona kudzivirira chingangova chipingaidzo mukutengesa maitiro. Mumutongo uchangobva kuitwa weAmsterdam Court of Appeal, Enterprise Division […]
Kugadziridza bumbiro reDutch: kuvanzika kwakadzama kukurukurirana kutaura kwakadzivirirwa zviri nani mune ramangwana
Musi waChikunguru 12, 2017, iyo Seneti yeDutch yakabvumirana mukubvumirana kweGurukota reMukati uye Kingdom Relations Plasterk kuti, munguva pfupi iri kutevera, zvirinani kuchengetedza zvakavanzika zveemail uye nekumwe kutaurirana kunovanzika. Chinyorwa 13 chidimbu 2 cheDutch Constitution chinotaura kuti zvakavanzika zvekufona […]
Mitemo mitsva yekushambadzira fodya yemagetsi isina nicotine
Kubva munaChikunguru 1, 2017, zvakarambidzwa muNetherlands kushambadzira fodya yemagetsi isina chikakananda uye neyekusanganisa mishonga yemapaipi emvura. Mitemo mitsva inoshanda kune wese munhu. Nenzira iyi, Hurumende yeDutch inoenderera mberi nemutemo wayo wekudzivirira vana vari pasi pemakore gumi nemasere Kubva musi waChikunguru 18, 1, […]
Rotterdam harbor uye TNT mubatwi wepasi rose hacker kurwiswa
Musi waChikumi 27, 2017, makambani epasi rese aive neTI isiri kushanda nekuda kwekurwadziswa kwewareware. KuNetherlands, APM (kambani hombe yekutakura midziyo yeRotterdam), TNT uye inogadzira mishonga MSD yakashuma kukundikana kweIT yavo system nekuda kwehutachiona hunodaidzwa kuti "Petya". Hutachiona hwemakomputa hwakatanga muUkraine kwayakabata […]
Google yakabhadharisa rekodhi yemabhiriyoni 2,42 eEU neEU. Uku kunongova kutanga, dzimwe mhosva mbiri dzinogona kupihwa
Zvinoenderana nesarudzo yeEuropean Commission, Google inofanira kubhadhara chirango cheEUR 2,42 bhiriyoni yekutyora mutemo weantitrust. European Commission inoti Google yakashandisa zvigadzirwa zvayo zveGoogle kutenga mumhedzisiro yeinjini yekutsvaga yeGoogle kukuvadza vamwe vanopa zvinhu. Zvisungo […]
European Commission inoda kuti varevereri vavazivise nezvekuvakwa…
European Commission inoda kuti vamiririri vavazivise nezvezvivakwa zvekudzivirira mutero zvavanogadzirira vatengi vavo. Nyika dzinowanzo kurasikirwa nemitero yemitero nekuda kwenzvimbo dzakawanda dzemunyika dzinovakwa nevateereri vemitero, maakaundendi, mabhangi nemagweta (vamiriri) vanogadzirira vatengi vavo. Kuwedzera kujekesa uye kugonesa kubhadharwa kwemitero iyoyo ne […]
Wese munhu anofanirwa kuchengetedza iyo yeNetherlands digitally yakachengeteka anoti cybersecuritybeeld Nederland 2017
Wese munhu anoda kuchengetedza iyo Netherlands manhamba akachengeteka anodaro Cybersecuritybeeld Nederland 2017. Zvakaoma kwazvo kufungidzira hupenyu hwedu pasina Internet. Zvinoita kuti hupenyu hwedu huve nyore, asi kune rimwe divi, zvinotakura yakawanda njodzi. Iwo matekinoroji ari kukura nekukurumidza uye iyo cybercrime-mwero iri kuwedzera. Cybersecuritybeeld Dijkhoff (Mutevedzeri […]
The Netherlands mutungamiriri wekuvandudza muEurope
Sekureva kweEuropean Innovation Scoreboard yeEuropean Commission, iyo Netherlands inogamuchira 27 zviratidzi zvehunyanzvi kugona. Netherlands ikozvino yave pachinzvimbo chechina (4 - 2016th nzvimbo), uye inonzi Innovation Leader mu5, pamwe neDenmark, Finland neUnited Kingdom. Sekureva kweMutungamiriri weDutch […]
Nhoroondo yemutero inotanga munguva dzeRoma. Vanhu vaigara munharaunda yehushe hweRoma vaifanira kubhadhara mitero. Mitero yekutanga yemitero muNetherlands inoonekwa muna 1805. Iwo musimboti wemutero wakaberekwa: mari. Mutero wemubhadharo wakaitwa zviri pamutemo muna 1904. VAT, mutero wemari, mutero wemubhadharo, […]
Iwe uri wechiDutch uye unoda here kuroora kune dzimwe nyika?
Munhu wechiDutch Vanhu vazhinji vechiDutch vangangodaro vanorota nezvazvo: kuroora panzvimbo yakanaka kunze kwenyika, pamwe kunyangwe kunzvimbo yaunoda, yegore yekuzorora kuGreek kana Spain. Nekudaro, kana iwe - semunhu wechiDutch - uchishuvira kuroora kunze kwenyika, unofanirwa kusangana nezvakawanda zvinodiwa uye nezvinodiwa […]
Musi waChikunguru 1, 2017, muNetherlands mutemo wezvevashandi unoshanduka…
Musi waChikunguru 1, 2017, muNetherlands mutemo wezvevashandi unoshanduka. Uye neizvozvo mamiriro ehutano, chengetedzo uye kudzivirira. Mamiriro ekushanda anoita chinhu chakakosha muhukama hwebasa. Vashandirwi nevashandi saka vanogona kubatsirwa nezvibvumirano zvakajeka. Panguva ino pane musiyano wakakura wezvibvumirano […]
Izvo zvakaderera mubhadharo shanduko muNederlands kubva 1 Chikunguru, 2017
Zera remushandi MuNetherlands mubairo wepasi unoenderana nezera remushandi. Mitemo yepamutemo pane yakaderera mubairo inogona kusiyana gore rega. Semuenzaniso, kubva munaChikunguru 1, 2017 iyo yepasi mubhadharo ikozvino inosvika € 1.565,40 pamwedzi kune vashandi ve22 uye pamusoro. 2017-05-30
Dai 22, 2017
Maitiro emitemo anoitirwa kutsvaga mhinduro kuchinetso…
Matambudziko emutemo Maitiro emutemo anoitirwa kutsvaga mhinduro yechinetso, asi kazhinji inozadzisa zvakapesana zvakakwana. Zvinoenderana netsvagurudzo kubva kuDutch research Institute HiiL, matambudziko epamutemo ari kugadziriswa zvishoma nezvishoma, sezvo yechinyakare maitiro modhi (iyo inonzi tambo yemutambo) pachinzvimbo inokonzeresa kupesana pakati pe […]
Dai 19, 2017
Mazuva ano, iyo hashtag haina kungofarirwa paTwitter ne Instagram ...
#tavonga Mazuva ano, iyo hashtag haina kungofarirwa pa Twitter ne Instagram: iyo hashtag iri kuwedzera kushandiswa kugadzira chiratidzo. Muna 2016, huwandu hwezviratidzo zvine hashtag pamberi payo hwakawedzera ne64% pasirese. Muenzaniso wakanaka weichi chiratidzo cheT-mobile '#getthanked'. Zvakadaro, kudaira […]
Mari yekushandiswa kwefoni yako kunze kwenyika iri kuderera nekukurumidza
Mazuva ano, zvave kutove zvishoma zvakajairika kudzoka kumba kune (isingazvizive) yakakwira foni bhiri yemazana mashoma emauro mushure megore regore, rakakodzera rwendo mukati meEurope. Mari yekushandisa nharembozha kunze kwenyika yakadzikira neanopfuura makumi mapfumbamwe muzana kana tichienzanisa neyapfuura mishanu kusvika […]
Dai zvaive kuna Gurukota reDutch…
Dai zvaive kuna Gurukota reDutch Asscher weSocial Affairs uye Welfare, chero munhu anowana muhoro wepamutemo mubhadharo anowana iwo wakaenzana akaenzana paawa mune ramangwana. Parizvino, muDutch mudiki paawa mubairo unogona kuramba uchitsamira pahuwandu hwemaawa akashanda uye chikamu […]
Wakambochengetera zororo rako online? Ipapo mikana yakakura zvekuti une…
Wakambochengetera zororo rako online? Ipapo mikana yakakwira kuti iwe wakasangana nezvipiwa zvinouya zvinonyanya kukwezva kupfuura zvavanopedzisira vaita, nekugumbuka kuzhinji semhedzisiro. Kuongororwa kweEuropean Commission uye neEU zviremera zvekuchengetedza vatengi kune […]
Mugwaro idzva reDutch raiswa padandemutande kuti ubvunze nhasi…
Dutch bill Mumutemo mutsva weDutch wakaiswa padandemutande kuti ubvunzwe nhasi, gurukota reDutch Blok (Kudzivirirwa neJustice) varatidzira chishuwo chekugumisa kusazivikanwa kwevanobata masheya. Ichakurumidza kugoneka kuzivisa ava vagovana pahwaro hwe […]
Mazuva ano, zvinoita zvisingaite kufungidzira nyika isina drones…
Drones Mazuva ano, zvinenge zvisingaite kufungidzira nyika isina drones. Nekuda kweiyi budiriro, iyo Netherlands inogona semuenzaniso kutonakidzwa nemifananidzo inonakidza yedrone yedziva rakasakara 'Tropicana' uye sarudzo dzakatobatwa kuti dzisarudze nezveyakanakisa dhironi bhaisikopo. Sezvo drones asiri […]
Zvekare Zvinyorwa →